Ikpeazụ Cut Pro X karịrị 2 nde ndị ọrụ | Esi m mac
Ikpeazụ Cut Pro X karịrị 2 nde ọrụ
Thesebọchị ndị a họpụtara, nnukwu ụlọ nzisa vidiyo a na-eme kwa afọ na Las Vegas. Apple chọrọ ịnọ ugbu a otu afọ. Oge a oge kwesiri ya maka ọtụtụ ihe. Nzọ dị mkpa ọ na-eme kemgbe njedebe nke 2016 na mmeghari ohuru nke nchịkọta akụkọ vidiyo kpakpando, Final Cut Pro X, nke hapụrụ ụlọ ọrụ ahụ ịtụnanya. Mana n'aka nke ọzọ, ha nọ n'udo, n'ihi na n'oge na-adịbeghị anya Ikpeazụ Cut Pro X eruwo 2 nde ọrụ. Na ogbako ogbako emere na ulo nzuko a tupu ndi mgbasa ozi di iche, Apple nyere nyocha ihe omuma ihe nlere nke vidio a, tinyekwara ihe ndi ruru ya.
Apple kwupụtara na ọ na-efu ya iji ruo otu nde ndị ọrụ na nchịkọta akụkọ kpakpando ya. Otú ọ dị, site na mmelite ndị kachasị ọhụrụ, ịga site na otu nde ruo nde abụọ efuola ha obere mbọ.
Ugbu a mbipute nke Ikpeazụ Cut Pro X, wepụtara na 2011 na mbido, ọ katọrọ nkatọ kpụ ọkụ n'ọnụ. Ndị ọkachamara ahụ ghọtara na ọ bụghị ngwanrọ ọkachamara, ụfọdụ kwudịrị na Apple ewerela nzọụkwụ azụ. Na mbu ile anya, myirịta dị n’etiti iMovie (onye nchịkọta akụkọ ụlọ) na Final Cut Pro X dị ọtụtụ, ma ọ dịkarịa ala site na ntanetị. Agbanyeghị, Apple akwụsịghị na mbọ ya wee melite ngwanrọ mmalite, yana obere mgbanwe na mmelite ọ bụla.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị ahụla mmepụta nke mmefu ego dị ukwuu, nke ejiri nchịkọta akụkọ ọkachamara nke Apple mee yana ndị ọkachamara ụlọ ọrụ na-eji ya eme ihe karịa. N'ezie, Njikwa ihe, dịka Apple maara anyị, yana ọba akwụkwọ, ihe omume na ọrụ dị mma maka ọtụtụ ndị nkwusa.
Site na ụdị nke ugbu a, 10.3.x, Apple emechaala gburugburu. Nke a kachasị ọhụrụ nke enyere ndị ọrụ na nkeji iri na ise nke 2016, na-anata okwu dị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ikpeazụ Cut Pro X karịrị 2 nde ọrụ
Hazie echiche gị na Cloud Outliner 2 Pro maka Mac maka ihe na-erughị euro
Esi gbanyụọ Ogwe Aka na MacBook Pros ọhụrụ